DOWNLOAD ब्रिटिश एयरोस्पेस Jetstream 31 / 32 FSX - Rikoooo
ब्रिटिश एयरोस्पेस Jetstream 31 / 32 FSX
डाउनलोड 10 542
सिर्जना 30-05-2011 06: 25: 59
परिवर्तन 06-06-2012 18: 03: 09
Jetstream 31 र 32 पूरा! FSX लागि, अनुकूलन ध्वनि, ककपिट 3D र 2D र4डेनमार्क, पूर्वी एयरवेज को रवि-एयर (बेलायत), संयुक्त एक्सप्रेस (ऐतिहासिक), शाही नौसेना T3 रूपमा repaints समावेश छ। निर्देशनहरू पढ्नुहोस्.
यो Jetstream 31 एक दबाव fuselage, संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रीय विमान बजार को आवश्यकताहरु पूरा डिजाइन संग एउटा सानो दुई-turboprop airliner छ।
यो Jetstream 31, पहिलो 28 जुन 1980 सय धेरै 29s मा बेलायत मा प्रमाणित जा रहेको छ 1982s समयमा निर्माण थिए, 31 मार्च 1980 मा उड्यो। 1985 मा, थप इन्जिन उन्नयन, को Jetstream सुपर 1988 रूपमा 31 मा उड्यो जो पनि Jetstream 32 रूपमा जानिन्छ, योजना थियो। उत्पादन जो समय 1993 386 / 31s उत्पादन गरिएको थियो 32, सम्म जारी राखे।
ब्रिटिश एयरोस्पेस Jetstream 31 / 32 FSX डाउनलोड
डाउनलोड:5440
डाउनलोड: 22 094
Zlin Z137T Turbocmelak FSX र P3D र FS2004
डाउनलोड:5108
डाउनलोड: 63 600
डाउनलोड: 22 248
डाउनलोड: 11 792
डाउनलोड: 12 238
Ilyushin इल-86 FSX र FSX स्टीम
डाउनलोड: 8 700
डाउनलोड: 1 983